Monday, January 14, 2019 3:03 AM EST
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi). Riot police are seen on a street during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Monday, an. 14, 2019. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has more than doubled the price of gasoline, hoping...
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi). Riot police are seen on the streets during protests over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Monday, Jan. 14, 2019. In an address Saturday, Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa more than doubled the price of...
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi). Riot police are seen on a street during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Monday, Jan. 14, 2019. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has more than doubled the price of gasoline, hopin...
(AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi). Protesters gather on a street during a demonstration over the hike in fuel prices in Harare, Zimbabwe, Monday, Jan. 14, 2019. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has more than doubled the price of gasoline, hoping t...
HARARE, Zimbabwe (AP) - Zimbabwean soldiers on Monday deployed in some urban areas where police clashed with protesters over fuel hikes, deepening the sense of crisis in a country whose economy is rapidly deteriorating.